Madoda, iinkampani, i-TV videos, ulwazi malunga iinkampani kwaye zabo engundoqo iimpawu - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Madoda, iinkampani, i-TV videos, ulwazi malunga iinkampani kwaye zabo engundoqo iimpawu
I-mantuan inkampani invests enye yezigidi euros kwi-uphando
I-TV yi-media iqonga thematic, oluzinzileyo ividiyo kokuxoxisana ne khomishinionke amalungelo agciniwe. ekhutshwe ukuphucula engundoqo iimpawu, iziganeko, inkcubeko kunye nokuyila isakhono somhlaba ukugqwesha ezahlukeneyo kwiindawo isi-Italian inkampani, ukufaka isandla eyakhe isiqulatho ukukhuthaza kwaye yandisa zabo ukubonakala, ukuvunywa kwaye popularity kwi-Intanethi. uvelisa ividiyo iindaba broadcasts ukuba uxwebhu imisebenzi, anike ulwazi, zichaza entsha iimveliso zaziswe ngexesha fairs, iziganeko okanye naliphi na isiganeko abafanelekileyo ka-promotion. Imbonakalo ye journalism kwi-TV isiqhagamshelanisi"Abantu kwaye Ezingama -"zifumaneka simahla, ngeli kwesicwangciso promo edition kunye"i-Wineries kwi Li brandi"sele engene a uphuhliso isigaba ukuba sele igqunywe lonke iwayini kwicandelo kummandla, apho ezahlukeneyo iinkampani ingaba ke wakha ukuba unako compete kunye kokukhona famous imibhalo ye inyaniso. Ndijonge kuba mali iqabane lakho ukuba bathenge a minority unesabelo naye ngendlela entsha inkampani controlled yi-Illy iqela, apho combines zine ezincinane iinkampani iinkampani enxulumene ne -"non-indebegenericname"- thengisa. Imbono: Ukukhula koqoqosho ukwenza uluhlu nganye nganye iinkampani. Ukususela Armani ukuba Ferragamo, ukususela Prada ukuba Versace, kwaye ababini iinkampani kwi-Lombardy uza ukomeleza ubudlelwane phakathi fashion brands.
Sonicar, inkokeli kwi-imveliso aluminum conveyors
Emva concluding kwisivumelwano kunye ziindlalifa zobukumkani kwi imveliso ifenitshala ye-cult rabhi, ifenitshala iqela acquired i-Azucena lemveliso, apho ndiya kunikela lokuqala manufactured izinto kuba ziyathengiswa iqala ukususela ngo-oktobha.
Turnover ngu-phantse yezigidi kunyaka-Italy kwaye billions ka-dollazi kwihlabathi liphela. Amakhulu kulutsha zithe recruited kule minyaka mihlanu idlulileyo, kwaye i-avareji-mali isixa-mali soloko malunga unyaka omnye. Kwiminyaka edlulileyo yayo umsebenzi, oko sele ngaphezu esebenzayo patents. I-Parker Ilanga xilonga kufutshane ukusuka NASA wenziwe yamiselwa, yokuqala yenzelwe ukuba uqhagamshelane Sun, apho uya imbali umgama we izigidi km: studying i-outer isiqingatha. Laura Francone, umfazi Umphathi e Lange, wenziwe ukuba uyasebenza usapho ishishini kuba amathathu eminyaka. I-Caserta esekelwe inkampani ilindele turnover ukwandisa nge malunga elinye isixa-mali ngenxa ukukhula kwi kumazwe angaphandle kwiimarike, ingakumbi KWETHU, Japan, Ichina kunye Yurophu. Ekuqaleni septemba, entsha ekwindla lwenkqubo ye ngentsasa radio broadcasts, narrated yi-umfazi ke ilizwi, iinyaniso ukusuka everyday ubomi ukuze sibe care malunga, portraits.
ITALIANO CHAT ROULETTE
ngesondo ividiyo Dating site omdala Dating free ividiyo ividiyo incoko ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko kunye guys esisicwangciso-mibuzo roulette nge-girls ividiyo incoko engeminye ividiyo ukuncokola nge-girls free ngaphandle ubhaliso makhe get acquainted ividiyo incoko roulette-intanethi watshata umfazi ifuna ukuya kuhlangana ads